Rocky Linux 8 - LinuxCapable တွင် KDE Plasma Desktop ကို ထည့်သွင်းနည်း
EPEL & Raven Repository ကို ထည့်သွင်းပါ။
Rocky Linux တွင် KDE Plasma ကို ထည့်သွင်းပါ။
ပထမဆုံးကြည့်ရှုခြင်းနှင့် KDE Plasma Desktop ကိုစစ်ဆေးခြင်း
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. KDE ထံမှလာ "K Desktop ပတ်ဝန်းကျင်" KDE Desktop နှင့် မရင်းနှီးသူများအတွက်၊ ၎င်းသည် အခမဲ့ open-source desktop ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Linux အသုံးပြုသူများအား နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအဆင့်မြှင့်တင်မှုအတွက် ၎င်းတို့၏ desktop ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အပလီကေးရှင်းများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန် အမျိုးမျိုးသော ဖြန့်ဝေမှုများတွင် အခြားဂရပ်ဖစ်အင်တာဖေ့စ်ကို ပေးဆောင်သည်။
Rocky Linux တွင်၊ ဤသည်မှာ Gnome ဖြစ်သည်။ ဂရပ်ဖစ်ပိုင်းမြှင့်တင်မှုများနှင့် ပြောင်းလဲမှုများအပြင်၊ ၎င်းသည် Linux Distributions အချို့သော မူရင်းတင်ပို့သည့် desktop များထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ပေါ့ပါးပြီး မြန်ဆန်ချောမွေ့သော ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
အောက်ပါ Tutorial တွင် သင်လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏ Rocky Linux 8 လည်ပတ်မှုစနစ်တွင် KDE Desktop Environment ကို ထည့်သွင်းနည်း။
အကြံပြုထားသော OS- Rocky Linux 8.+.
သင့်ရဲ့ဒိတ်လုပ်ပါ Rocky linux လက်ရှိ ပက်ကေ့ဂျ်များ အားလုံးကို ခေတ်မီကြောင်း သေချာစေရန် လည်ပတ်မှုစနစ်
ရှိပြီးသား သို့မဟုတ် sudo အကောင့်အသစ်ကို စနစ်ထည့်သွင်းရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်ခန်းစာတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ Rocky Linux တွင်အသုံးပြုသူအား Sudoers ထံမည်သို့ထည့်မည်နည်း။.
KDE ဒက်စ်တော့ကို မတပ်ဆင်မီ၊ ၎င်းကို မကြိုက်ပါက နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လိုပါက အရန်များ သို့မဟုတ် အစီအစဉ်များကို ဖန်တီးပါ။ မည်သည့် Desktop Environment ကိုမဆို ဖယ်ရှားခြင်းသည် ရှုတ်ထွေးနေပြီး စနစ်မတည်ငြိမ်မှုများနှင့် ကျပန်းထည့်သွင်းထားဆဲ အပလီကေးရှင်းများဆီသို့ ဦးတည်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အထူးသဖြင့် အသစ်နှင့် ပျမ်းမျှအသုံးပြုသူအတွက် ပက်ကေ့ဂျ်များကို မထည့်သွင်းမီ မူလအခြေအနေသို့ ပြန်သွားရန် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပထမတာဝန်မှာ Raven Repository နှင့် EPEL ကိုတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ (လုပ်ငန်း Linux အတွက် အပိုပက်ကေ့ခ်ျ) သိုလှောင်မှု။ EPEL repository packages များကို Red Hat Enterprise မှ ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ (RHEL)။ သို့သော်၊ မှီခိုမှုအားလုံးသည် ခေတ်မီသည်မဟုတ်ပါ။ လမ်းကြောင်းအောက်မှပြသထားသည့် သီးခြားပက်ကေ့ဂျ်များကို ထည့်သွင်းရန် Raven repository လိုအပ်ပါသည်။
ရေရှည်တွင်၊ EPEL သည် RHEL 8.5 အတွက် မွမ်းမံပြီးသည်နှင့် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဤသင်ခန်းစာ၏နောက်ကွယ်တွင် နောက်ကျကျန်နေသောကြောင့် ၎င်းကို ဖယ်ရှားနိုင်သည် သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ breeze-gtk-ဘုံ အထုပ်။ သို့သော်၊ Raven ၏သိုလှောင်မှုတွင် nano text editor နှင့် အခြားသောပက်ကေ့ဂျ်အချို့ကဲ့သို့သော မွမ်းမံထားသော package အချို့ပါဝင်သောကြောင့် ၎င်းသည် ထိန်းသိမ်းရကျိုးနပ်ပေမည်။
သင်၏ terminal ကိုဖွင့်ပါ၊ EPEL နှင့် Raven ၏သိုလှောင်မှုကိုထည့်သွင်းမည့်အောက်ပါ command ကိုအသုံးပြုပါ။
ထို့နောက် repository ကို install လုပ်ပြီးဖွင့်ပါ။ breeze-gtk-ဘုံ အထုပ်။
ထည့်သွင်းစဉ်အတွင်း Raven ၏သိုလှောင်မှုအတွက် GPG သော့ကို ထည့်သွင်းရန် သင့်အား သတိပေးပါလိမ့်မည်။
Y အမျိုးအစား၊ ထို့နောက်နှိပ် ကီးထည့်ပါ။ ဆက်လုပ်ရန်နှင့် တပ်ဆင်မှုကို အပြီးသတ်ရန်။
KDE Plasma ကို မတပ်ဆင်မီ ဒုတိယတာဝန်မှာ ပါဝါကိရိယာများ သိုလှောင်ရာကို ဖွင့်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင်၏ပုံမှန် Linux ပက်ကေ့ဂျ်စီမံခန့်ခွဲမှုကိရိယာများ၊ Red Hat Enterprise Linux အတွက် yum နှင့် SUSE Linux Enterprise ဆာဗာအတွက် zypper ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စနစ်က လိုအပ်သည့် အစီအစဥ်အတိုင်း သင်လိုအပ်သော ပက်ကေ့ဂျ်များကို အလိုအလျောက် ထည့်သွင်းနိုင်စေပါသည်။
ယခုသင်ခန်းစာ၏နောက်ထပ်အပိုင်းသို့သွားကာ KDE Plasma ကိုထည့်သွင်းပါ။
လိုအပ်သော repositories များကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်၊ သင်၏ Rocky Linux 8 စနစ်အတွက် အစားထိုး desktop ကို ယခု စတင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါပြီ။
ပထမဦးစွာ၊ သင်၏ terminal တွင် KDE ကိုရရှိနိုင်ကြောင်းသေချာပါစေ။
ယခု KDE Plasma ကို ထည့်သွင်းရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
ထည့်သွင်းစဉ်အတွင်း EPEL repository အတွက် GPG သော့ကို တင်သွင်းရန် သင့်အား သတိပေးပါလိမ့်မည်။
Y အမျိုးအစား၊ ထို့နောက်နှိပ် ကီးထည့်ပါ။ installation ကိုအပြီးသတ်ဖို့။
ထို့နောက်ကို select “ပလာစမာ (Wayland)” သို့မဟုတ် “ပလာစမာ (X11)” default အစား “Standard (Wayland display server)။
မှတ်ချက်၊ ကျူတိုရီရယ်က ၎င်းကို စမ်းသပ်ရန် Plasma Wayland ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် တန်ဖိုးရှိသည့်အတွက် စမ်းသပ်စဉ်အတွင်း မည်သည့်ပြဿနာမျှ မကြုံတွေ့ခဲ့ပါ။
အကောင့်ဝင်ပြီးသည်နှင့်၊ ထင်ရှားသောအရောင်နှင့် နောက်ခံပြောင်းလဲမှုများအပြင် UI ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်ကို သင်သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။ ယခု Taskbar သည် အချိန်ပြသသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ဘယ်ဘက်အောက်ခြေနှင့် ညာဖက်ထောင့်ရှိ နောက်ထပ် windows အမျိုးအစား taskbar တစ်ခုနှင့် ဆင်တူသည်။
သင်ခန်းစာတွင်၊ သင်သည် KDE Plasma Desktop Environment ကို ထည့်သွင်းနည်းကို အောင်မြင်စွာ လေ့လာသင်ယူပြီးဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ KDE သည် ၎င်းတို့၏ ဒက်စတော့များ၊ လက်ပ်တော့များနှင့် netbooks များမှ အများဆုံးအသုံးပြုလိုပြီး သမားရိုးကျ ဒက်စတော့အလင်္ကာကို နှစ်သက်သူများအတွက် စံပြအဖြစ် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကွန်မြူနတီပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
KDE Plasma အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက်၊ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းလမ်းညွှန်.
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား Rocky linux Tags: KDE Plasma Desktop ပတ်ဝန်းကျင်, RockyLinux 8 post navigation
စနေနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ4ရက်၊ 2021 ခုနှစ် နံနက် 5:14 နာရီ
KDE ကို ခွေးသွားစိပ်တွင် ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် KDE စတင်ရန် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းမှာ ပါသလား။ အသုံးပြုသူအားလုံးအတွက် ၎င်းကို ပုံသေထားရန် နည်းလမ်းရှိပါသလား။
မှ Reply အင်ဒရူး
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ 8 ရက်၊ 2021 ခုနှစ် နံနက်6နာရီ
မင်္ဂလာပါ Andrew မက်ဆေ့ခ်ျအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လုပ်နိုင်ပေမယ့် နည်းနည်းတော့ ရှုပ်နေဖို့ လိုပါတယ်။
ပိုကြီးတဲ့ userbase အတွက် ပုံသေလိုအပ်နေသူများအတွက် bash script လိုမျိုး တစ်ခုခုကို ထည့်သွင်းဖို့ မဆိုးပါဘူး၊ KDE အတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုပ်ဖို့ ဘယ်တုန်းကမှ မလိုအပ်တဲ့အတွက် အဲဒါကို အမျိုးအစားခွဲပြီး သင့်လျော်သလို စမ်းသပ်ဖို့ အချိန်အနည်းငယ်လိုပါတယ်၊ ပို့စ်မတင်ခင် တစ်ခုခု စမ်းကြည့်ချင်ပါတယ်။